Ny tsara indrindra any Portugal | Vaovao momba ny dia
Ny tsara indrindra any Portugal
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, General, Portiogaly
Portugal dia firenena feno tsy ampoizina, an'ny toerana manan-tantara sy habaka voajanahary izay afaka maka ny fofonain'iza n'iza. Sarotra ny misafidy faritra iray hitsidika azy, satria samy manana toerana manokana izy rehetra. Ka andao hojerentsika amin'ny famintinana izay tsara indrindra any Portiogaly, hieritreretana ny diantsika manaraka.
Any Portiogaly isika dia manana tendrombohitra sy kilometatra amoron-tsiraka, nosy ary tanàna feno fialamboly, noho izany dia azo lazaina fa misy karazana fizahan-tany ho an'ny tsiro rehetra. Raha te hankafy ireo zorony tsy mampino indrindra ianao dia manome hevitra mahaliana vitsivitsy izahay.
1 Lisbon sy Sintra
2 Porto sy Aveiro
3 Algarve sy ny morontsiraka
4 Óbidos sy Coimbra eo afovoany
Lisbon sy Sintra
Tsy maintsy manomboka ny fitsangatsanganana amin'ny renivohitr'i Portugal sy ny iray amin'ireo tanàna mahaliana indrindra ianao. Lisbon dia tsy isalasalana fa toerana irinafanalan'ny maro izay hankafizany ny maha-izy ny portogey tena izy. Amin'ity tanàna lehibe ity isika dia afaka mankafy ny manodidina izay manana toetra sy hatsaram-panahy maro toa an Alfama manodidina sy Chiado. Ny katedraly Lisbonne dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary tsy maintsy ho hitanao ihany koa ny Carmo Convent, izay rava fa mitovy tsara tarehy. Mila mandeha amin'ny tram-by ianao hankany amin'ny faritry ny tanàna, mitsidika ny Monastery Jerónimos ary mandeha amin'ny Torre de Belem. Toerana hafa tsy hadino ny Plaza del Comercio sy ny Castillo de San Jorge.
Manakaiky an'i Lisbonne dia mahita tanàna mahafinaritra be izahay ary matetika no vangiana miaraka amin'ny renivohitra. Manondro ny Tanàna Sintra, izay ahitantsika ny Palacio da Pena, ilay miloko sy mahafinaritra indrindra eto an-tany. Tokony hitsidika ny Quinta da Regaleira koa ianao, miaraka amin'ny iray amin'ireo zaridaina tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Porto sy Aveiro
Porto no tanàna hafa izay mahazatra rehefa miresaka momba an'i Portugal. Ity toerana ity dia manolotra antsika ny mety hanandrana ilay divay malaza amin'ny anarana mitovy. Ao an-tanàna dia tsy maintsy very ianao eny an-dalambe, mankafy fitsangatsanganana an-tsambo ao amin'ny Douro ary misakafo any amin'ny trano fisakafoanana amoron'ny renirano. Ao an-tanàna dia mila mahita ny Fivarotamboky Lello, ny tetezana Don Luis I, ny Clérigos Tower, ny Katedraly na Sé, ny tsena Bolhao ary Rúa Santa Catarina, ny varotra be indrindra eto an-tanàna.
Any akaikin'i Porto dia manana Aveiro isika, izay lalana iray hafa mahaliana izay hita ao anatin'ny ora vitsivitsy. Tanàna kely izy io miavaka ny moliceiros, sambo sasany izay manao varotra nefa namadika azy io ho Venise kelin'i Portugal. Any akaikin'i Aveiro dia manana an'i Costa Nova ihany koa izahay, toerana misy trano tsara tarehy voaravaka doko miloko.
Algarve sy ny morontsiraka
Ny faritra atsimon'i Portiogaly ihany koa no mpizahatany indrindra manana fizahan-tany amoron-dranomasina voamarika. Ao amin'ny Algarve dia afaka mahita kilometatra amoron-tsiraka kilometatra miaraka isika morontsiraka tsy mampino toa an'i Benagil na Playa da Rocha tsara tarehy. Nefa misy ihany koa ny tanàna sy tanàna sasantsasany izay mendrika hotsidihina. Albufeira, Lagos na Faro dia teboka mahaliana amin'ity faritra ity, ary koa ny Ria Formosa Natural Park. Izy ireo dia nokleary izay hita mangingina ao anatin'ny iray andro.
Óbidos sy Coimbra eo afovoany
Raha mankany amin'ny faritra afovoan'ny firenena dia mila mitsidika ny tanànan'i Óbidos ianao, toerana misy rindrina misy tantara maro. Ho hitantsika ny Porta da Vila, miaraka amin'ireo taila manga tsara tarehy izay mampiavaka azy any Portiogaly, mandehandeha amin'ireo rindrina manodidina ny tanàna ary hahita ny tranon'ny medieval ao an-tanàna nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ao amin'ny Rua Direita dia hahita toeram-pivarotana isan-karazany koa izahay mba hividianana zava-pisotro malaza indrindra amin'ity toerana ity, ny ginja, liqueur serizy matsiro.
Coimbra dia tanàna iray izay matetika no tsidihina, miaraka amin'ny oniversite tranainy indrindra ao amin'ny firenena izay azo tsidihina ihany koa satria avy amin'ny Weapon Room ka hatramin'ny efitrano fanadinana tsy miankina. ny Zaridaina botanika na kianjan'ny varotra dia toerana hafa izay hita.
Ao amin'ny nosy Madeira tsara tarehy dia misy zotra maro misy ny fomba fijery sy ny tontolon'ny natiora hita. ny Viewpoint Cabo Girao the Faja dos Padres or the Ponta do Sol dia ny sasany amin'izy ireo. Ny traikefa toy ny fiara tariby Funchal na dobo voajanahary an'i Porto Moriz dia tsy tokony hohadinoina. Funchal no renivohitra ary ao an-tanàna ianao dia afaka mahita toerana toy ny zaridaina sy ny katedraly.
Any amin'ny Azores dia misy nosy maromaro hita. Amin'ny lehibe indrindra izay an'ny San Miguel no Miradouro da Boca do Inferno malaza izay ahitanao ny Laguna del Canario. Hetsika mahazatra any amin'ireny nosy ireny ny mandeha sambo hijery cetaceans. Azonao atao koa ny mianika ny Serra de Santa Bárbara izay misy ny toerana avo indrindra ao amin'ny nosy Terceira.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny tsara indrindra any Portugal